​इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट बैङ्कले १० प्रतिशत बोनस सेयर दिने, सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व वृद्धि
काठमाडौं । इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट बैङ्कको छैठौं वार्षिक साधारणसभाले सेयरधनीलाई नौ दशमलव पाँच प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्तावलाई पारित गरेको छ । बैंकको बिहीबार सम्पन्न सभाले गत वर्षको मुनाफाबाट उक्त बानेस सेयर..
सहकारी संस्थालाई ‘बचतकर्ता नठगिउन् भन्दै सर्कुलर
झापा । डिभिजन सहकारी कार्यालय झापाले ठूला कारोबार गर्दै आएका जिल्लाका २८ वटा सहकारी संस्थालाई ‘कलेक्टरमार्फत बचतकर्ता नठगिउन भन्दै सचेत गराएको छ । नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था (एनएमसी)को चन्द्रगढीस्थित सेवा केन्द्रका..
​शाइन रेसुङ्गा र नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस बिच अन्तर बैंक विद्युतीय भुक्तानी सम्झौता
काठमाडौं । बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई अन्तर बैंक विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा आवद्ध गराउदै लाने क्रममा नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडले, शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैक लिमिटेडसंग अन्तर बैंक विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सेवा सम्बन्धि..
​राष्ट्र बैंकको डेपुटि गभर्नरमा चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठ नियुक्त
काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालको सिफारिसमा बुधबारको मन्त्रीपरीषद वैठकले शिवाकोटी र श्रेष्ठलाई नियुक्त..
​बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधन विधेयकमाथि दफाबार छलफल सुरु
काठमाडौं । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संसदको अर्थ समितिअन्तर्गतको उपसमितिमा आजदेखि दफाबार छलफल सुरु भएको छ । उपसमितिले विधेयकमाथि आज कानुन व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेको..
सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको २५ प्रतिशत बोनस बीमा समितिबाट स्वीकृत
काठमाडौं । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको २५ प्रतिशत बोनस सेयर बीमा समितिले स्वीकृत गरेको छ । यो कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लगानीकर्तालाई बोनस दिन लागेको हो । गत आर्थिक बर्षमा कम्पनीले..
काठमाडौं । चुक्ता पूँजी ८ अर्ब रुपैंया पुर्याउने दौडधुपमा रहेको सनराइज बैंकले नारायणी नेशनल फाइनान्सलाई खरिद गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता गरेको छ । सोमबार एक कार्यक्रमका बिच बैंक तथा फाइनान्सका अध्यक्षले एक्विजिशन..
प्रभु बैंकको ६४ लाख १७ हजार ७ सय ७० कित्ता हकप्रद शेयर निष्काशन
काठमाडौं । ग्राण्ड बैंकसंग मर्जर पुरा गरि एकिकृत कारोबार सुरु गरेको प्रभु बैंकले तत्कालिन प्रभु बैंकका शेयरधनीका लागि मात्र ५ बराबर १ कित्ताका दरले हकप्रद शेयर निष्काशन गरेको छ । बैंकले..
मौद्रिक नीतिका लक्ष्य पूरा हुन कठिन :नेपाल राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले इन्धनलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा झन्डै छ महिना अवरोध भएका कारण मौद्रिक नीतिले लक्षित गरेका उद्देश्य हासिल गर्न कठिन हुने स्पष्ट गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको..
पोखराको मुक्तिनाथ विकास बैंकले काठमाण्डौं शाखा खोल्यो, शाखा संख्या ५० पुगे
काठमाडौं । पोखरामा मुख्य कार्यालय रहेको मुक्तिनाथ विकास बैंकले काठमाण्डौंमा शाखा स्थापना गरेको छ । बैंकले काठमाण्डौंको महाराजगंजस्थित नारायणगोपाल चोकमा सञ्चालनमा ल्याएको शाखाको उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले उद्घाटन..
​नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा आज गर्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार दिउसो चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार समिक्षामा मूल्यबृद्धि दर साढे ९ प्रतिशत..
​सांग्रीला डेभलपमेन्ट बैंकको साधारण सभाबाट बोनस सेयर पारित, पूँजी १ अर्व ७ करोड पुग्ने
काठमाडौं । सांग्रीला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले यो वर्ष चुक्ता पूँजीको २०.८५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । बैंकको एघारौं वाषिर्क साधारणसभाले आर्थिक वर्ष ०७१-७२ को खुद मुनाफा मध्येबाट चुक्ता..
​नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक ३१ औं वर्षमा प्रवेश, झण्डै १ खर्ब निक्षेप
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले ३० औं वर्ष पार गरेको छ। नेपालको वित्तीय जगतमा उच्च स्थान लिने उद्देश्यले १५ फागुन २०४२ मा यो बैंक स्थापना भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो..
फेरी अर्को दुर्घटना कालिकोटमा : काष्टमण्डप एयरको जहाज
काठमाडौं । नेपालगञ्जबाट जुम्लाकालागि उडेको काष्टमण्डप एयरको जहाज दुर्घटना भएको छ। कारिकोट गाविसको २ तिलखामा जहाज दुर्घटना भएको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिष्णु प्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए। जहाजमा ९ जना सवार..
​निर्धन उत्थान बैंक र लघु उद्यमी महासंघबीच लघु उद्यमीलाई ऋण दिने सम्झौता
काठमाडौं । निर्धन उत्थान बैंक र राष्ट्रिय लघु उद्यमी महासंघबीच लघु उद्यमीलाई कर्जा प्रवाह गर्ने विषयको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । संझौता अनुसार निर्धनले लघु उद्यम विकास कार्यक्रम ९मेडेप० र नेपाल..
​मेरो माइक्रोफाइनान्सको सेयर फागुन २० गते निस्कासन हुने
काठमाडौं । नुवाकोटको बिदुरमा मुख्य कार्यालय रहेको मेरो माइक्रोफाइनान्सले आगामी २० गते आईपीओ सेयर निस्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले सेयर आह्वान गर्दै चाँडोमा फागुन २७ गते सेयर निस्कासन बन्द हुने..
​इन्भेष्टमेण्ट बैंकको एफपिओ संस्थापक शेयरधनीले आवेदन दिन नपाउने
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको नयाँ शेयर निष्काशनका सम्बन्धमा नेपाल धितोपत्रबोर्डले औपचारिक भनाई सार्वजनिक गरेको छ । उसले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै बैंकले जारी गरेको एफपिओमा सम्बन्धित बैंकको संस्थापक, सञ्चालक..
​एसबिआई बैंकले गर्यो अन्तर बैंक विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैक लिमिटेड पनि अन्तर बैंक विद्युतीय भुक्तानी (एनसीएचल आईपीएस) प्रणालीमा आबद्ध भएको छ । नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेड र नेपाल एसबिआई बैक लिमिटेडबीच अन्तर बैंक विद्युतीय..
​खोटाङको हलेशीबाट सेञ्चुरी बैंकको शाखारहित बैकिङ सेवा सुरु
काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडले खोटाङ जिल्लाको हलेशीबाट शाखारहित बैंकिङ सेवा सुरु गरेको छ । बैंकले हालसम्ममा ३१ वटा शाखा, २८ वटा ए।टी।एम्, ११ वटा शाखारहित बैंकिङ र दुईटा एक्सटेन्सन्..
​सिभिल बैंक र आइपे रिलाएबल रेमिटेन्सबीच रेमिट्यान्स सम्झौता
काठमाडौं । सिभिल बैंक लिमिटेड र आइपे रिलाएबल रेमिटेन्सबीच रेमिट्यान्स भुक्तानी सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जन र आइपे रिलाएबल रेमिटेन्सका कार्यकारी निर्देशक इन्द्र शर्माले..
​फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्सको खुद मुनाफा ८ करोड
काठमाडौं । फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्सको खुद मुनाफा ८ करोड ८० लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ जुन गत वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा ७२ दशमलव ५४ प्रतिशतले वृद्धि हो । गत वर्षको..
​सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको २५ प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्योे
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले २५ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको छ । बैंकले हाल कायम चुक्ता पुँजीबाट ४:१ अनुपातमा प्रति सेयर एकसय रुपैयाँ अंकित १८ लाख ४० कित्ता हकप्रद..
​प्रभु समूहले अब मर्चेन्ट बैंकिंग कारोबार पनि गर्ने, ग्रोमोर मर्चेन्ट किन्यो
काठमाडौं । प्रभु समूहले मर्चेन्ट बैंकिंग व्यवसायमा पनि हात हालेको छ । दरबारमार्गमा कार्यालय रहेको ग्रोमोर मर्चेन्ट बैंकर लिमिटेडको ४० प्रतिशत सेयर प्रभु समूहले किनेको हो । ग्रोमोरको सम्पूर्ण व्यवस्थापन पक्ष..
​प्रभु बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन परामर्श दिने
काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेडले ठुला निक्षेपकर्तालाई मध्यनजर गर्दै सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी सेवा सुरु गरेको छ । बैंकले ५० लाख भन्दा ठुला निक्षेपकर्तालार्इ लगानी सम्बन्धी परामर्श दिन भन्दै ‘वेल्थ मेनेजमेन्ट..
​एनविआईको तनहुँको जामुनेमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम
काठमाडौं । नेशनल बैंकिङ ईन्ष्टीच्युटले तनहुँको जामुनेमा वित्तीय साक्षरता सचेतना कार्यक्रम गरको छ । कार्यक्रममा विभिन्न समूहका गरी ४५ जना सहभागीहरुको उपस्थिति थियो । युवा, ग्रामीण भेगका महिला, विप्रेषणमा आश्रति परिवार,..
​सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक र इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंकले ६ महिनामा कति कमाए?
काठमाडौं । सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकको खुद मुनाफा गत वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा ३ गुणाले वृद्धि गरी ९ करोड ८३ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ भने गत वर्षको सोहि अवधिमा ३..
रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकको नौ प्रतिशतमा सेयर धितो कर्जा
काठमाडौं। रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकले नौ प्रतिशत ब्याजदरमा सेयर धितो कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ। बैंकले ग्राहकले कागजात पेश गरेको तीनदिन भित्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने पनि जनाएको छ। बैंकले कर्जा अवधि..
​एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको खुद मुनाफा १२ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं । एभेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीले दोस्रो त्रैमासमा खुद मुनाफा १२ दशलमव ५ प्रतिशत वृद्धि गरी ९१ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोहि अवधिमा मुनाफा ८७ लाख रुपैयाँ..
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको मुनाफा १ अर्ब ७ करोड, निक्षेप १ खर्ब २८ अर्व रुपैयाँ
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को दोस्रो त्रैमासमा ८ अर्ब चुक्ता पुँजी भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले खुद मुनाफा १ अर्ब ७ करोड १९ लाख रुपैयाँ कमाउन सफल भएको छ जुन..
​नेपाल वित्तीय संस्था संघद्वारा नेपाली फुटबल टोलीलाई १० लाख रुपैंया दिने घोषणा
काठमाडौं । २३ वर्ष पछि दक्षिण एशियाली खेलकुद सागमा पुरुष फुटबलको उपाधि जितेको नेपाली टोलीलाई नेपाल वित्तीय संस्था संघले १० लाख रुपैंया प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार सम्पन्न साग..
Results 1896: You are at page 41 of 64